Apple Podcasts dia mihemotra mandra-pahatongan'ny volana Jona | Avy amin'ny mac aho
Apple dia nanambara tamin'ny alàlan'ny mailaka tamin'ny podcasters fa marina izany manemotra ny fanombohana ny famandrihana podcast an'ny orinasa. Nolazaina tany am-boalohany fa hanomboka amin'ny Mey ity sehatra podcast vaovao voaloa ity, saingy mampihemotra ny fandefasana azy izao hahafahanao manao fanovana bebe kokoa amin'ny fampiharana Apple Podcasts.
Ao amin'ny mailaka Nahazo an'i 9to5Mac, Nanazava i Apple fa hanomboka famandrihana sy fantsona Apple Podcasts tamin'ny volana Jona "hiantohana ny traikefa tsara indrindra ho an'ny mpamorona sy mpihaino."
Manoratra izahay hanome anao fanavaozana ny amin'ny fisian'ny fantsona sy ny famandrihana Apple Podcasts. Faly izahay amin'ny valin'ny fanambarana tamin'ny volana lasa. Mahafaly ny mahita famandrihana sy fantsona vaovao an-jatony natolotry ny mpamorona erak'izao tontolo izao. Mba hahazoana antoka fa manome ny traikefa tsara indrindra ho an'ny mpamorona sy mpihaino izahay, Ny famandrihana sy fantsona Apple Podcasts dia hanomboka amin'ny Jona izao. Hiresaka vaovao farany momba ny fisian'ny sy fanao tsara indrindra izahay hanampiana anao amin'ny fanomanana ny famandrihana sy fantsom-pahitalavitra amin'ny alàlan'ity gazety ity.
Manaiky ihany koa i Apple olana natrehin'izy ireo ny mpamorona rehefa mampiasa Apple Podcasts Connect:
Araka ny nitateranay voalohany ny volana lasa teo, ANy Podcasts Directory dia nanana olana isan-karazany hatramin'ny volana aprily. Araka ny efa hitanao, midika izany fa mandany fotoana ny fanavaozana ireo mpihaino. Nandritra ny herinandro vitsivitsy lasa izay, ny mpamorona sasany dia niaina fanemorana ny fisian'ny atiny sy ny fidirana amin'ny Apple Podcasts Connect. Niresaka momba ireo fahatapahana ireo izahay ary nanentana ireo mpamorona manana olana hifandray aminay.
Raha vantany vao misy amin'ny Jona, hamela podcasters hanolotra ny sehatra fisoratana anarana nandoa ny fandaharan'izy ireo. Miaraka amin'ny atiny bonus toy ny fizarana tsy misy doka sy fizarana tokana an'ny mpanjifa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Ny Apple Podcasts dia nahemotra hatramin'ny Jona